Sweden oo uu ka dhacay ”dhul-gariir” siyaasadeed aan abid horay loogu arag (Xasarad siyaasadeed & xisbi laga cabsanayey oo guulaysan kara) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sweden oo uu ka dhacay ”dhul-gariir” siyaasadeed aan abid horay loogu arag...
Sweden oo uu ka dhacay ”dhul-gariir” siyaasadeed aan abid horay loogu arag (Xasarad siyaasadeed & xisbi laga cabsanayey oo guulaysan kara)
(Stockholm) 21 Juun 2021 – Waxaa dhacday Xumuumaddii Sweden ee uu hoggaaminayey RW Stefan Löfven oo ka tirsan Xisbiga Social Demokraterna, kaddibna markii looga codeeyey 181 cod oo kalsoonida kala laabtay. 91 ayaa isaga u codaysay, 51 waa ka aamuseen, 8 xildhibaanna waa maqnaayeen.
Nooshi Dadgostar oo ka tirsan Xisbiga bidixda fog ee VänsterPartiet oo kahor inta aan la codaynin wax yar kahor in rakada laga hadlo istaagtey iyada oo kalsooni badan muujinaysa tiri:
”Ma aha Xisbiga VänsterPartiet aanu ahayn midka ka dal doorsaday Social Demokraterna, balse ay iyagu (Social Demokraterna) yihiin cidda ka dal doorsatay Xisbiga V iyo dadwaynaha Sweden.”
Yeelkeede, Annelie Karlsson oo ah madaxa Xildhibaannada S ee ku jira Baarlamanka ayaan la dhicin sababaynta Nooshi, iyadoo ku doodday in Xisbiga V oo bidix fog ah ay ceeb ku tahay inay isbahaysi aan ”barakaysnayn” ay la galaan xisbiyo aysan isku siyaasad ahayn oo midig ah, si xukuumadda loo rido.
Hoggaamiyaha Xisbiga Midigta Fog ee cunsuriga ah, Jimmie Åkesson (SD), ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay dhicitaanka dowladdii bidixda ahayd. ”Waxaan markii ugu horreeysey muujinnay inaan guulaysan karno.” ayuu ku faanay.
Sweden ayaa sidan ku gashay xasarad siyaasadeed oo naadir ah.
Codaynta kaddib, xisbiyadii isbahaysanayey ee Socialdemokraterna, Liberalerna iyo Vänsterpartiet ayaa ku baaqay shir jaraa’id.
Previous article”Waxaaba dhici karta in madax furasho loo haysto!” – Aragtiyo waalli ah oo kasoo baxaya sababta ay usoo laaban la’yihiin Ciidanka Eritrea jooga (Daawo)
Next article”Waa seefta aastada ah ee dalkeenna!” – Turkiga oo samaystay gantaal markab dile ah oo ka fiican mid uu Maraykanka ka iibsan jirey (Daawo)